WAR DEG DEG AH:Farmaajo oo kaabiga loo saaran yahay & Madaxtooyada oo lala wareegi rabo kadib markii…. – Puntlandtimes
WAR DEG DEG AH:Farmaajo oo kaabiga loo saaran yahay & Madaxtooyada oo lala wareegi rabo kadib markii….
GALKACYO(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dibad baxyo saaka ka bilowmay gudaha magaaladaasi ay kusii baaheen qaybo kamid ah Muqdisho isla markaasna dhalinyaro ka cadhaysan dilka Darawal Mooto Bajaajle iyo qof shacab ah oo uu dilay askari kamid ah ciidamada dowladda Soomaaliya ay haatana kaabiga u saaran yihiin madaxtooyada Soomaaliya.
Shacab cadhaysan oo isugu jira dhalinyaro, waalidiin iyo ganacsato ayaa magaalada meel walba ku gubaya Taayiro, iyagoo ka xun in dowladdu ay ka gaabsatay wax ka qabashada dilalka askartu ay u gaysanayso dhalinyarada ku shaqaysta Mooto Bajaajta.
Hay’adaha amniga iyo maxkamadaha dalka ayaan marnaba cadaalada hor keenin askarta dilalka ka gaysta Muqdisho, waxaana suurta gal ah in kacdoonku sii xoogaysto oo isku badalo mid ay faraha lasoo galaan kooxaha mucaaradka ku ah dowladda Farmaajo.
Madaxweynaha ayey ka dalbanayaan dhalinyaradani in ay cadaalad helaan lana soo qabto askarigii dilka gaystay, waxaana ciidamo ka tirsan maamulka degmada Howlwadaag ay jir dil iyo xadhig u gaysteen shaqaale ka tirsan TV-ga Somali Cable.
Ciidamada Booliska degmada Howlwadaag ayaa jir dil xoogan u gaystay sawir qaade Ismaaciil Muuse Allright, waxaana ciidamadu ay ku xidheen wariyaha xarunta Booliska degmadaasi.
Sawirqaade Ismaaciil Allright ayaa wali u xidhan ciidamada dowladda oo saaka u shaqo tagay dibad bax aad u weyn oo ay dhigayeen darawalada ku shaqaysta Mooto Bajaajta iyo dhalinyaro kale, kuwaas oo qaybtood xabsiga la dhigay.
Xukumada ka’arimisa magalada muqdisho ma’ah mid arxan leh dadka muqdisho,Asaguna ma’ah dad lo’arxamo waxa muqata laba arxan lawe oo isku baab ah wa isu Qalman,waxa dinta islamku qabta ama rumeysantahay,shacabka Xun waxa lagu salada masuul xun oo ciqaba,wa arinta muqdisho katagan wa midas.
Mohamud ali..gaale jabsho says:
Shacabka Muqdisho waa Somaliweyne…dadka raba in ey qabyaalad ka dhigaan oo rabo in lagu laabto dagaal sokeye ilaah dhulka nila gooyo…waa dadka shisheeyaha u shaqeeya…